I-China ihleli ngeyona Ntsika ibalulekileyo yeNgxelo yoShishino lweMoto yeHlabathi
Abenzi beemoto abathathu baseJamani iVolkswagen, iBMW kunye neDaimler baxhamla “kwinqanaba elingaphezulu komndilili” ukusuka ekubuyisweni kweemarike e-China njengoko ukuthengisa kwabo i-Q3 e-China kunyuke ngeepesenti ezilithoba xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo, i-EY iqaphele. I-BERLIN, nge-23 kaDisemba (i-Xinhua) -Imakethi yaseTshayina iphinde yavelisa ...
I-China ilungisa iirhafu kwimpahla yorhwebo engenisiweyo
I-China iyakuhlengahlengisa uluhlu lwamaxabiso okungenisa elizweni kuluhlu lweemveliso ukuqala ngoJan. 1, 2021 ukuxhasa ukukhuthaza iparadigm entsha yophuhliso kunye nokukhuthaza uphuculo oluphezulu, ngokweKhomishini yeRhafu yaMazwe eBhunga likaRhulumente. Amaxabiso erhafu okwethutyana angaphantsi kunalawo athandwa kakhulu ...
I-China Ukuvumela ukungeniswa kwempahla yentsimbi kunyaka olandelayo
Ukuqala nge-2021, i-China izakuvumela ukungeniswa kwempahla yentsimbi kunye nezinto zentsimbi ezihlangabezana nomgangatho wesizwe kuba zingenzi inkunkuma eqinileyo, batsho abasemagunyeni. Imfuno engqongqo kulawulo lokungeniswa kwensimbi kunye nezinto zentsimbi zichaziwe, ngokwesaziso ...
IFransi ibhengeza isiCwangciso se-8-Bln-Euro sokuKhusela uMzi mveliso weZithuthi eziGulayo
Umongameli wase-France u-Emmanuel Macron ngolwe-Lwesibini utyhile isicwangciso sokuhlangula esizizigidigidi ezisibhozo zeerandi (i-8.78 yezigidi zeedola zase-US) ukunceda ukubuyisela ishishini leemoto lasekhaya libethwe kakhulu kukutshixwa kwe-coronavirus. Isicwangciso sigxile kwimveliso yezithuthi ezilungele indalo. “Izitepsi ...